प्रचण्डको प्रश्न – केपीले फट्याई गर्न पनि कति सकेको ? - ९ माघ २०७७, NepalTimes
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओली प्रवृतिलाई अघि बढाउने भुल नगर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्द काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिनमा केपी ओली प्रवृतिविरुद्द भित्रभित्रै संघर्ष गर्ने र त्यस्तो प्रवृतिलाई अघि बढाउने भुल नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने – ‘म तपाई जनसमुदायलाई साक्षि राखेर के प्रतिज्ञा गर्न चाहान्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृतिजस्तो प्रवृतिप्रति उदार भएर भित्रभित्र संघर्ष गर्ने अनि उनको प्रवृतिलाई अगाडी बढाउन त्यस्तो खालको भुल अब हामि गर्ने छैनौँ । म प्रतिबद्दता र संकल्प गर्न चाहान्छु ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्दका घाइते र अपांगलाई उपचार गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको भएपनि नमानेको र अहिले आफु अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले केही नगरेको भनि आरोपित गरेको बताए । उनले भने – ‘सरकारलाई मैले पटक पटक यि घाइते अपांगको उपचार हुनुप¥यो । पहिले खाइपाइ आएको मासिक भत्तापनि खोसिदिएछ यो सरकारले त झन । गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यहि मान्नेछ । मैले धरैचोटी भन्दा कहिँ कतै टेडपुच्छर लाइएन, उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । घाइतेको उपचार गर्ने कुरालाई पुरै वेवास्ता गरियो । पार्टी विभाजन र आफु अल्पमतमा परेपछि म सुन्छु घाइते अपांगलाई हेर्नुपर्दैन भन्ने यहि केपी । फट्याई गर्न पनि कति सकेको ? जालझेल गर्न नि कस्तो दिमाग हो ?’
अध्यक्ष प्रचण्डले कालिबहादुर खामको मुद्दा ठिक ढंगले हल गर्न लगातार लागिरहेको बताए । उनले भने – ‘कालिबहादुर खाम खोई अरे ? त्यो कालिबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरेको त होईन । उसको मुद्दा ठिक ढंगले हल होस् भन्नका लागि दश, एघार वर्षदेखि लगातार लागेको छु । उसलाई परेको साह्रो गाह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु । अहिले त कालिबहादुर खाम तपाईलाई प्रचण्डले हेर्दैन, जनमुक्ति सेनाको कमाण्डरलाई जसलाई मैले १० वर्ष स्कुलिङ गरेर, हुर्काएर, माया गरेर, विकास गरेर एउटा ठाउँमा पु¥याएको । ति मान्छेको चाहिँ अब केपी ओलीले संरक्षण गर्ने रे । आमाको दुध चुसेर भएन बाको घुँडो । जनमुक्ति सेनाका सबै कमाण्डर, योद्धा, घाइते साथीहरु भ्रमित नहुनुहोला ।’